उद्योगीहरु धमाधम एमालेमा प्रवेश, कांग्रेसलाई धोका ! « Ok Janata Newsportal
उद्योगीहरु धमाधम एमालेमा प्रवेश, कांग्रेसलाई धोका !
काठमाडौं । गत शुक्रबार देशका करिब दुइ सय ३५ जना उद्योगीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खादा ओढाएर एमालेमा प्रवेश गराए । त्योभन्दा अघि पनि उद्योगी धमाधम एमालेमा प्रवेश गर्दै थिए भने अझै केही लाइनमा छन् ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक उद्योगपति राजेशकुमार अग्रवाल मंगलबार नेकपा एमालेमा भित्रिएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अग्रवाललाई खादा र टिको लगाएर पार्टीमा स्वागत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगड केही दिनमा नै एक सय ५० जना उद्योगी–व्यवसायी नेकपा एमाले प्रवेश गर्न तयारीमा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको कुरा बुझ्नुभएकाले उद्योग र व्यावसायी एमालेमा आकर्षित भएका हुन् ।’
ओली प्रधानमन्त्री भएर आएपछि देशका उद्योगी र व्यापारीमाथि चन्दा आतंक बन्द भएको, बन्द–हड्ताल अन्त्य भएकाले व्यवसायी सकारात्मक बनेको उनको दावी छ । विश्वको राजनीतिमा पनि ठूला व्यापारी र उद्योगपतिले गरेको भन्दै दुगडले नेपालमा पनि त्यही ट्रेन्ड सुरु भएको उल्लेख गरे ।
‘नेपालमा उद्योगी र व्यापारीले राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेका उद्योगी–व्यवसायी पनि आर्थिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक पाटीसँग जोडिनु स्वभाविक हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा आएर आफुले उद्योग राज्यमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्दा निजीक्षेत्रका समस्या समाधान गरिदिएको दुगडले दावी गरे । आफूले व्यवसायीका कुनै पनि सरकारी काम तीन दिनभित्र सकिने वातावरण निर्माण गरेकाले पनि निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यवसायी एमालेमा आकर्षित भएको उनले बताए ।
अहिले उद्योगीलाई पार्टी प्रवेश गराउने कामको संयोजन दुगडले नै गरिरहेका छन् । उनले १३ महिना उद्योग बाणिज्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।
केही दिनअघि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका व्यवसायी किशोर प्रधानले एमालेको सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानको अग्रसरता देखाएकाले आफूहरु प्रभावित बनेको बताए । उनले भने ‘सरकार निजीक्षेत्र मैत्री भएकाले नै व्यापारी र उद्योगी एमालेतर्फ आकर्षित भएका हुन् । सरकारले निजी क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान गरेको छ र बाँकी केही समस्या समाधानतर्फ प्रयास भइरहेको छ ।’
नेपाल चम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल उद्योगी र व्यवसायीले पार्टी प्रवेश गर्नु व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा भएको बताउँछन् । ‘यसमा हामीले खासै टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन, यो नितान्त उहाँहरुको वैयक्तिक विषय हो,’ मल्लले भने ।
राजनीतिक–आर्थिक विश्लेषक अच्चुत वाग्ले भने सत्तारुढ दलमा प्रवेश गरेर उद्योगीहरुले राजनीतिक संरक्षण खोजेको टिप्पणी गर्छन् । ‘राजनीतिक संक्षणविना स्वतन्त्र रुपमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो उद्योगधन्दा सहजरुपमा सञ्चालन गर्न र सरकारको प्रिय बन्न यसरी पार्टी प्रवेश भएको हुनुपर्छ ।’
नवनियुक्त चार मन्त्रीलाई राजीनामा दिन पार्टीको दबाब
आज रातिदेखि लागू हुनेगरी एकसाता लकडाउन घोषणा
पार्वत गुरुङलाई टेरेनन् सञ्चार मन्त्रालयकै कर्मचारीले
जेठ १५ सम्ममा वडा–वडामा कमिटी